Madda Walaabuu Press: Godina Gujii Keessatti Uummata Oromoo Mirgaa fi Qabeenya Isaa Falmatu Qe’ee Isaa Irratti Rasaasaan Reebuun Falmii Qabsoo Oromoo Daran Dabala Malee Duubatti Hin Deebisu.
Gaaffi mirgaa karaa nagaa gaafataniif rasaasa uummatatti roobsuun sabboontoti Oromoo rasaasa Wayyaaneen dhahamanii Hosptala seenani fi kannen wareegaman keessaa gariin:-
1. Gochaan uummata Gujii laga Dambii irratti raawwate gochaa sukkanneessaa Oromoo irra gahe waan ta’eef gochi kun akka itti fufuuf mootummaan Wayyaanee waggaa 10 mallatteessuufiin isaanii garajabummaaf lafarrraa Oromoo balleessuuf akka kaayyeeffatan raageessa. Kanaaf balaan uummata Gujii laga Dambii irratti gahe kan uummata Oromoo guutummaarra gaha jiru ta’uu hubachuun marti gamtaa’inaa akka jalqabnetti diddaan Qeerroo Bilisummaa itti hafau!
2. Lola maqaa Liyyuu hayilii jedhuun waraanni Wayyaanee baneen, Akkasuma lola maqaa Komandpost’n Oromoo irratti labasamee jiru qolachuuf waan danda’uun dhalli Oromoo kamuu qabsoo sabaatti makamee akka diina innika ofirraa qolatu Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsa!
3. Maqaa Liiziif pilaanii magaalaa Finfinneen, akkasuma maqaa investment uummataa magaalaaf Baadiyyaa jiraatu uummataa Oromoo lafaaf qaneenyasaa saamuun itti fufee kan jiru Wayyaaneef diinni Oromoo hanga, maqaa waarshaa Shukaaraaf. Waarshaalwewwan garaagaraa akkasuma maqaa kondominiyeemiin beenyaa gahaa, tokko malee lafarraa Uummataa Oromoo dhiibuun itti babal’atee adeemaa waan jiruuf ummanni Oromoo dammaqiinsaan FXG akka itti fufu Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsa.
4. Olola dharaa akka waan rakkoo, gaddaaf gadaadoo keessaa baaneetti gartuun TPLFn moggaasa aangoo argachuun bobba’an ummanni Oromoo itti wareegamee asiin gahe waadaa kijibaan dagamee akka balaa biraaf of hin saaxilletti bilisummaa fi walabummaa guututti argachuuf qabsoo itti fufuu qaba.
5. Badii dalagaa turaniif murnoota Wayyaanee kaleessaa kanneen ajjeesaa, godaansisaa, lafarraa buqqaasaa, saamaa turan seeratti dhiyaachuurra ittuu yakkamoonni wal badhaasuurra wayiita jiran kanatti qabsoon roga arfaniin finiintee dhoote kan walitti fufiinsaa kuula qabsoo Oromoo miidhaksaa deemaan ta’uu Uummanni Oromoof Qeerroo Bilisummaa hubachuu qaba
Caamsaa 8, 2018